သာလွန်ဇောင်းထက်| January 8, 2013 | Hits:14,063
မြန်မာ့အထည်ချုပ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနောက် မလိုက်ပါနှင့်နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် ရန်ကုန် စက်မှုဇုန်မြေ ကျပ်သိန်းသောင်းချီ ဈေးတက်မြန်မာ - အင်ဒိုနီးရှား ကုန်သွယ်ရေး ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံအထိ တိုးမြှင့်သွားမည်ဘာလဲဟဲ့ ဒီဂျစ်ဆဲလ်နေပြည်တော် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် ဧည့်သည် စံချိန်ကျိုးမည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Sai Linyone January 8, 2013 - 4:23 pm	Who care these ugly automobiles? What kind of cars are these? They look odd and so ugly.